android ဖုန်းအဘို့စင်ကြယ်သော Web Browser | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » စင်ကြယ်သော Web Browser-Fast & ကြော်ငြာကို Block & ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်
စင်ကြယ်သော Web Browser-Fast & ကြော်ငြာကို Block & ဗီဒီယို APK ကို Download လုပ်ပါ
စင်ကြယ်သော Browser ကိုသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ခိုင်မာတဲ့ကြော်ငြာ blocker, ဗီဒီယို sniffer ကိုနှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောဘရောက်ဇာသည်, သူကနိမ့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လျော့နည်းသိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်အတူ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
★ Tiny Size ကို
★ပို features တွေ★ ရိုးရှင်းသော & စူပါအစာရှောင်ခြင်း
အရွယ်အစား 3M သာ, ပေါ့ပါးပြီးအလွန်မြန်ဆန်စွာလျော့နည်းအရင်းအမြစ်များကိုထယူပါ။
★ လုံခြုံရေး & privacy ကို
ကြော်ငြာမပါ, အဘယ်သူမျှတွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာမျှမ Collection user data ကိုထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
★ ကြော်ငြာ blocker
အစွမ်းထက်ကြော်ငြာကိုအလိုအလျောက် browsing အတွက်ကာလအတွင်းကြော်ငြာအကြောင်းအရာစစ်ထုတ်ပေးကြောင်းအင်္ဂါရပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ အများစုကိုသင်မလိုချင်တဲ့ကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ကူညီပေးသည်။
★ ဗီဒီယိုကို sniffer
အစွမ်းထက်သောဗီဒီယိုသင်အလွယ်တကူအရှိဆုံးက်ဘ်ဆိုက်ဗီဒီယိုများကို download လုပ်ပါကကူညီမှစွမ်းရည် sniffing ။
★ ရုပ်ဖျက် Mode ကို
လုံးဝသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဆိုသမိုင်းထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲသီးသန့်တည်ရှိမှု mode မှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုပါ။
★ ညဥ့် mode ကို
အနိမ့်အလင်း၌ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ browsing တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ညအချိန် browsing အတွက် mode ကိုနှင့်သင်၏မျက်စိကာကွယ်ပါ။
★ ပိုများသော features တွေ
QR Code ကို, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်စာမျက်နှာ, စာသား-သာလျှင်, Screenshot, မျက်နှာပြင်အပြည့်, စာမျက်နှာ, စာမျက်နှာ Translate, Bookmarks Import / Export ထဲမှာရှာပါ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက, အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ purelitebrowser@gmail.com သို့မဟုတ်ကြေးနန်း https://t.me/PureBrowser, ကျနော်တို့သင်တို့အဘို့မဆိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
1 ။ ကြော်ငြာ blocker စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
2 ။ တစ် Third-party ကစားသမားကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုများကစားဘို့အထောက်ခံမှုကဗီဒီယိုကို download function ကိုပိုကောင်းအောင်
3 ။ web page ကိုနောက်ခံအရောင် function ကို Add
4 ။ ဖုန်းကို desktop ပေါ်မှာ function ကိုမှ shortcuts တွေကို Add
5 ။ ရှာဖွေမှုဘား Widget လေး Add
6 ။ main menu ကိုအတွက်အစာရှောင်ခြင်း switch ကို UserAgent နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း data တွေကို function ကို Add
7 ။ အချို့သော bug တွေကို fix
စင်ကြယ်သော Web Browser-Fast & ကြော်ငြာကို Block & ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်
3.65 ကို MB